Barcelona Oo Ogaatay Waqtiga Uu Garoomada Kusoo Laabanayo Ansu Fati - Laacib
HomeWararka CiyaarahaBarcelona Oo Ogaatay Waqtiga Uu Garoomada Kusoo Laabanayo Ansu Fati
Barcelona Oo Ogaatay Waqtiga Uu Garoomada Kusoo Laabanayo Ansu Fati
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa rajaynaysa inay dib u hesho xiddigeeda da’da yar ee Ansu Fati oo dhaawac cusub uu haleelay.
Fati oo muddo toban bilood iyo dheeraad ah ka maqnaa garoomada ayaa diob usoo laabtay horraantii xilli ciyaareedkan, hase yeeshee muruqyada ayaa uu ka dhibaatoonayaa oo illaa laba jeer oo kala duwan ay waxyeello kasii gaadhay labadii bilood ee ugu dambeeyey.
Dhaawacan ugu dambeeyey ayaa soo gaadhay horraantii bishan, isaga oo markaas uun kasoo kabtay mid hore, waxaana uu seegay kulankii muhiimka ahaa ee Benfica ee Champions League ee xalay oo ay kooxdu rajaynaysay inuu qayb ka noqdo.
Laacibkan taabashadiisu dahabka tahay ee gool-dhalintiisu heerka sare tahay ayaa la sheegay in Barcelona ay dib u heli doonto ciyaarta Bayern Munich ee oo ugu dambaysa heerka group-yada xilli ciyaareedkan, taas oo haddii laga badiyo ay halis ugu jiraan inay ka hadhaan tartankan.
Xavi Hernandez ayaa waxa uu rajaynayaa in Fati uu ciyaari doono kulanka horyaalka LaLiga ee Real Betis ee December 4, taas oo afar maalmood kaddibna ay la ballansan yihiin Bayern Munich oo ay ugu tegi doonaan waddanka Jarmalka.
Barcelona ayaa u baahan inay garaacdo Bayern Munich ciyaarta ugu dambaysa Group-kooda, si ay usoo gudbi karto, haddii se laga badiyo waxay macasalaamayn kartaa horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League haddii ay Benfica soo garaacdo Dynamo Kiev.